सिटी र पीएसजीको के होला नतिजा? नेइमार भन्छन: सिटीलाई हराउन सबथोक गर्नेछु। - Malayakhabar
होम पेज खेलकूद सिटी र पीएसजीको के होला नतिजा? नेइमार भन्छन: सिटीलाई हराउन सबथोक गर्नेछु।
सिटी र पीएसजीको के होला नतिजा? नेइमार भन्छन: सिटीलाई हराउन सबथोक गर्नेछु।
एजेन्सी (खेलकुद):= यूईएफए च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा आज राति इङ्ग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटी र फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) भिड्दै छन्। आजको खेल राति १२: ४५ मा सिटीको घरेलु मैदान इतिहाद स्टेडियममा हुनेछ।
अघिल्लो लेख आईपीएल क्रिकेटका बाँकी सबै खेल मुम्बईमा आयोजना गर्ने तयारी।
पछिल्लो लेख नेपाल-भारत सीमा नाकामा जाँच छैन, भारत आवातजावत खुलमखुल्ला।